प्रधानमन्त्री ओली 'इन्साफ' माग्दै - Sidha News
प्रधानमन्त्री ओली ‘इन्साफ’ माग्दै
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गामा अनियमितता भएको थाहा पाएर आफूले छानबिन गराए पनि मिडियाले इन्साफ नदिएको गुनासो गरेका छन्।
सम्पादकहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ललिता निवास प्रकरणमा छानबिन गराई आफूले जग्गा पत्ता लगाएको तर, उल्टै आफूमाथि आरोप लगाएको भन्दै गुनासो गरेका हुन्। यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पादकहरूसँग ‘इन्साफ’ समेत मागेका छन्।
‘अब म तपाईंहरूले एउटा ‘इन्साफ’ गर्नुपर्छ भन्छु। ललिता निवास के मेरो सरकार बनेपछि बेचेर व्यक्तिलाई दिएको हो र? उहिले हिनामिना गरिएको जग्गा अहिले मैले छानबिन गराउँदै छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पादकहरूसँग भने, ‘यसमा एकातिर सिआइबीलाई छानबिन गर्न लगाएको छु, अर्कोतिर अख्तियारलाई छानबिन गर्न लगाएको छु। दुईतिरबाट छानबिन हुँदैछ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त छानबिनको ‘जस’ आफूलाई नदिएकोमा पनि सम्पादकहरूसँग चित्त दुखाए।
‘मुद्दा त मैले गर्ने होइन, अदालतले किनारा गर्ने हो, यो सबै छानबिन गरेर अदालतमा मुद्दा पेस हुन्छ। मैले त छानबिन गराउने हो,’ उनले भनेका छन्। यसअघि पटक–पटक सरकार बने पनि कसैले जग्गाको छानबिन गर्ने आँट नगरेको भन्दै उनले सम्पादकहरूलाई स्पष्ट पारे।
‘यसभन्दा अगाडि पनि सरकार थिए, तर कसैले छानबिन त गराएनन्। मैले छानबिन गराउँदै छु। अनि, जसले यो छानबिन गराउँदैछ, त्यसैलाई आरोप? तपाईंहरूले इन्साफ गरिदिनुस्, न्याय गरिदिनुस् न!’ ओलीले सम्पादकहरुसँग भने।
२०७४ साल फागुन ३ गते दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएर ललिता निवासको जग्गा खोजी गर्न लगाएका थिए। २०७५ साल असार १५ गते गठित त्रिताल समितिले जग्गा छानबिन गरी मंसिर २५ गते प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत मंगलवार विशेष अदालतमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहित १ सय ७५ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।